ဆောင်းရာသီ အိုလံပစ်ပွဲတော်တွင် မြောက်ကိုရီးယား ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် မတွေ့အောင် မိုက်ပင်? - Yangon Media Group
တောင်တန်းဒေသ ပြောင်ချန်တွင် အားကစားသမားများအား ကြိုဆိုမှုနာရီအတော်ကြာပြီးနောက် တောင်ကိုရီးယားနှင့် မြောက်ကိုရီးယား အားကစားသမားများသည်ဖွင့်ပွဲတွင် အတူချီတက်လာခဲ့ကြသည်။ စကားအရာ အပြန်အလှန် အပြစ်ပြောခြင်းများ အဆုံးသတ်ကာ တောင်ကိုရီးယားက မြောက်ကိုရီးယား၏ နျူကလီးယားအစီအစဉ် ကြောင့် တင်းမာမှုလျော့ကျအောင် အိုလံပစ်ပွဲအခါ၌ ဆွဲဆောင်ခဲ့ပြီး နျူကလီးယားလက်နက်စွန့်လွှတ် အောင် ဆောင်ရွက်မည်ဟုဆိုသည်။ ကြိုဆိုပွဲမပြုလုပ်မီ အိမ်ရှင်မွန်ဂျေးအင်က ပင့်စ်အား မြောက်ကိုရီးယားအမည်ခံခေါင်းဆောင်နှင့် ထိုင်ခံ ၁၂ ခုပါ စားပွဲတွင် မျက်နှာချင်းဆိုင်ချထားလိမ့်မည်ဟု မီဒီယာများက ဖော်ပြခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် ပင့်စ်သည် အမေရိကန်အားကစားသမားများနှင့် တွေ့ဆုံရန်ရှိသဖြင့် ကြိုဆိုပွဲ၌ ခဏတာသာထိုင် နေခဲ့သည်ဟု အိမ်ပြာတော်က ကြေညာခဲ့သည်။
ပင့်စ်သည် ဧည့်သည်များနှင့် လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခဲ့ရာတွင် ဂျပန်ဝန် ကြီးချုပ် ရှင်ဇိုအာဘေးနှင့် လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခဲ့သော်လည်း ကင် ယောင်နမ်နှင့် လက်ဆွဲနှုတ်ဆက် ခြင်းမလုပ်ခဲ့ဟု အိမ်ပြာတော် အရာရှိတစ်ဦးက ပြောခဲ့သည်။ အမေရိကန်က မြောက်ကိုရီးယားအား နျူကလီးယားနှင့် ဒုံးပျံအစီအစဉ်တွင် ပျက်ပြားအောင် အရေးယူပိတ်ဆို့မှုအသစ် ပြုလုပ်ရာတွင် တောင်ကိုရီးယားသမ္မတ မွန်ဂျေးအင်က ထောက်ခံခဲ့ကြောင်း ပြောခဲ့သည်။ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ကင် ယောင်နမ်နှင့် မြောက်ကိုရီးယား ခေါင်းဆောင်ကင်ဂျုံအန်၏ညီမ ကင်ယိုဂျောင်တို့သည် ညီညွတ်ရေး အလံအောက်မှ တောင်နှင့်မြောက်ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံ အားကစားသမားများ ချီတက်လာသည်ကို လက် ပြနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြသည်။ ဤသည်မှာ ဆယ်စုနှစ်တစ်စုအတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ် ဖြစ်သည်။
မကြာမီ မွန်းက အိုလံပစ်ပွဲ တော်ဖွင့်လှစ်ကြောင်း တရားဝင် ကြေညာခဲ့သည်။ မီးရှူး မီးပန်းများ ပစ်ဖောက်ကာ တောင်ကိုရီးယား အိုလံပစ်ရွှေတံဆိပ်ရှင် ကင်ယူနာက အုံလံပစ်မီးရှူးတိုင်ကို ထွန်းညှိ ပေးခဲ့သည်။ အားကစားကွင်းအနီးတွင် မြောက်ကိုရီးယားဆန့်ကျင်သူများနှင့် ရဲများ ပဋိပက္ခဖြစ်ခဲ့ကြသေးသည်။ ကင်ယိုဂျောင်နှင့် သူ၏အဖွဲ့ အား သမ္မတမွန်းက အိမ်ပြာတော် တွင် ညစာဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံခဲ့ ကြောင်း အိမ်ပြာတော်ကဆိုသည်။ ကင်ယောင်နမ်မှာ မြောက်ကိုရီးယားမှ တောင်ကိုရီးယားသို့လာ ရောက်သည့် ပထမဆုံးအဆင့်အမြင့် ဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်။
ရန်ကုန် စက်မှုဇုန်များမှ ညပိုင်းလုပ်ငန်း လည်ပတ်ရသည့် စက်ရုံများကို မီတာခလျှော့ချပေးရန် ဆေ??
အောင်လံမြို့နယ် ကျေးရွာလမ်း ၁၁ လမ်းကို အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်အကူအညီဖြင့် အဆင့်မြှင့်တင်မည်
NCA လက်မှတ် မရေးထိုးရသေးသည့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်များ ပါဝင်လာရေး UPDJC အဖွဲ့ဝင်များ အတတ်နု??